Template Excel si looga beddelo Isuduwaha Juqraafi ee UTM - Geofumadas
Febraayo, 2008 ArchiCAD, Cartografia, Downloads
Mawduucani wuxuu fududeeyaa isuduwidda juquraafi ahaan juqraafi ee darajooyinka, daqiiqadaha iyo ilbiriqsiyada Isku-duwaha UTM.
Xogta waa in lagu farsameeyaa xaashida sare, habka ay ugu yimaadaan qaabka loo baahan yahay. Dabcan, xaddidaadaha caadiga ah ee laxiriira qiyamka qiyamka la aqbalay waa in la ixtiraamo markaan hadlayno waxaanu sharxi doonaa isuduwayaasha UTM.
Wareegga waxaa lagu doortaa qaabka hoos loo dhigo
Qodobka ugu horeeya ayaa ah kaliya in la dhigo tiro tiro
Xaglaha jaalaha ah waa inay galaan isku-duwidda juqraafi
Labada latitudes iyo dhererka waa inay ku yimaadaan tirooyin (iyadoon lahayn darajo, daqiiqo ama ilbiriqsi), oo loo kala soocayo iskeelo kala duwan, kan danbe wuxuu yeelan karaa jajab.
Darajooyinka dhererka waa inaysan gaarin 180
Darajooyinka latitudes waa inaysan gaarin 90
Daqiiqadaha iyo ilbiriqsiyadu waa in aysan gaarin 60, maxaa yeelay waxay horey u ahaan lahaayeen qaybta ku xigta
Bariga / Galbeedku waa inay noqdaan "E" ama "W", caasimadda
Waqooyi / koonfur waa inay ahaato "N" ama "S"
Haddii aad maareysid si aad ugu diyaariso bog kale oo ka mid ah excel, oo leh sifooyinkaas waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad sameyso nuqul / dhejis
Xaglaha cagaaran waa iskudhafyada UTM, sida ku cad qaybta loo yaqaan "sphere of choice", waxaa weliba lagu muujinayaa aagga.
3. Sida loogu diro AutoCAD
Qaybta dheeraadka ah waa isuduwidda UTM si aad ugu soo dirto AutoCAD oo keliya waxaan ku sharaxnaa maqaal kale. Si aad uga soo dirto 'Excel UTM' Google Earth arag maqaal kale.
Dib u eeg, oo ka warbixi wixii arrimo ah
Template si loogu badalo isku-duwidda juquraafi ilaa UTM.
Post Previous" Hore Abuuritaanka Isku-xirka Isku-xirka
Post Next Beddelaan UTM isuduwaha in juqraafi ExcelNext »
51 wuxuu ku jawaabayaa "Template Excel si looga beddelo iskuduwaha juqraafi ee UTM"
U qor farriin emayl ku soo gaadhay goorta aad iibsanaysay, si ay kuugu soo diraan shey aan kaabayn oo keliya isku-duwayaasha darajo, daqiiqado iyo sekanno laakiin sidoo kale tobanlayaal ah.
Waxaan iibsaday shaxanka si aan ugu beddelo juqraafi ahaan UTM. Su’aashaydu waxay tahay: Sideen u gali karaa isku duwaha jajab tobanlaha?
Sida muuqata shaxdu ma aqoonsana iyaga, maxaa yeelay waxay muujineysaa nooc kale oo UTM ah (aag).
Hadday sidaas sameeyaan.
Laakiin waa inaad daryeeshaa, in xogtaadu leedahay:
comma oo ah kumanaan gooniya, sidaa darteedna tahay: -56.514,707 -12.734,156
Calaamadee haddii aad bedeli karto taas oo ku yaal goobahaaga.
Haddii aad rabto inaad isku daydo ka hor intaadan iibsan, u soo dir tusaale xog ah heer sare, tafatiraha boostada (@) geofumadas. com
Alves isagu wuxuu leeyahay:
Qorshahan wuxuu u rogaa Isku-duwaha Juquraafi ahaan (Grau Decimal) ee UTM mitir ahaan
Miguel Navarrete isagu wuxuu leeyahay:
Aad baad u mahadsantahay, waxaan horeyba uheystey shaashadda, kaliya hal shaki, inkasta oo aan horey u aqriyey boostada ku saabsan sida shaashadu u shaqeyso iyo ku saabsan iskuduwaha UTM, haddii aan ku suganahay Jasiiradda Yucatan oo aan leeyahay qodobka soo socda N 20 - 26 - 31.5 W 90 - 01 - 42.5, sidaan yeelo oo kale haddii tilmaamayaasha sheegaan in meelaha cirka ah aysan gaari karin 90 digrii, aad baan u jeclaan lahaa caawintaada
Xalay ayaa laguugu soo gudbiyay, boostada miguel.manamond ...
Waxaan u gudbinay miguel.navarrete ...
Haddii aad shaki qabto, noo soo sheeg.
Hello maalin wanaagsan mushaharka xalay via paypal template Excel si loogu badalo wadataa juqraafi in UTM, laakiin ma link download, Anigu waxaan haystaa id macaamil haddii loo baahdo waxaan u hesho, waxaan noqon doonaa ogyahay salaan jawaabta
Waxaan diidey emailka xariirka ee download.
Dhibaatooyin kasta iima oggola inaan ogaado.
Rafael Gallardo López. isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ku bixiyay PayPal, mana jirto wax ikhtiyaari ah oo aan ku dhicin wax ka mid ah rasiidka Paypal.
Bixiyay 13 ee Luulyo ee 2.017. 08: 59: 22 GMT + 02: 00.
Aqoonsiga gawaarida: 6SC71916TD634893X
Fadlan ii sheeg sida loo soo dejiyo faylka.
Dolphin isagu wuxuu leeyahay:
inaad ka guurto min heerarka daqiiqadaha iyo darajooyinka iyo jajab tobanlaha, waa inaad u kala qaybisaa daqiiqadaha 60 iyo ilbiriqyada 3600, ixtiraamka jajab tobanle ee labadan qiimood ee graos, nasiib.
Waxaad samayn kartaa jibbaar.
Ángel Vilches isagu wuxuu leeyahay:
Marka hore, waxaan kuugu mahadnaqaynaa inaad wadaagto aqoontaada.
Midda labaad: Waxaan ka soo degsaday juqraafi ahaan juqeylka UTM, laakiin waxaan u baahanahay inaan ogaado waxa loo yaqaan 'spheroid' ee aan u isticmaalo Brazil, ama sharrax ka mid ah kuwa loo isticmaalo goobo kala duwan.
sharaxaad aad u wanaagsan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
Brian isagu wuxuu leeyahay:
Template waa ka Geograficas ilaa UTM
Hubi emaylka, mararka qaarkood waxay u dhacdaa spam. Laakiin markii lacag bixinta la sameeyo waxaad heli doontaa risiidhka PayPal iyo emayl leh soo bixitaan soo dejin ah.
Lacag bixinta, Sidee ayaad u soo dejisan kartaa?
jose matzar isagu wuxuu leeyahay:
samee goobaabin 1.00 dhexroor ah markaa xulo goobaabka kadib markaad gasho isku-duwaha UTM ka dibna furaha gala ka dib xarafka z ka dibna xarafka E ka dibna geli isla markaana si otomaatig ah u aadi meeshigaaga iskuduwaha UTM, samee tijaabada ka dibna ii sheeg.
Taasi waa sax Ma awoodo.
Si aad u shaqeysid UTM aagga aagga uu isbeddelayo, waa inaad sameysid isbeddel been ah tan, sidaas awgeed xaafaddaadu way sii ballaareysaa.
Ama ka shaqee isku-duwidda juquraafi.
Jasiel isagu wuxuu leeyahay:
Hello, galab wanaagsan. Su'aashaydu waa tan: Maxaan samayn karaa haddii aad gashid isku-duwidda macaamiisha si otocad ah oo aanad u tilmaami karin gobolka aad wadid? Waxaan horey u leeyahay iskudhafyada UTM, laakiin autocad ma qabanayso (ama aanan helin hab lagu bedelo) gobollada. Tusaale marka aan galo UTM isku duwo gobolka 15 wax dhibaato ah ma qabo, laakiin markii aan galo gobolka 16 ma dhigayo qaybta la rabo.
Fiiri faylka spamka, had iyo jeer la socota macaamilka iyo risiidhka rasiidka ayaa soo celiya urlka gaaban.
Waxaan horeyba u bixiyaa lacag bixinta iyo wax aan la soo dejin .. ma soo diri kartaa boostada?
Hore ayaan bixiyay, waxna ma aanan helin ... maxaan sameeyaa?
Badhanka buluuga ah ee dhaha "Download"
Humberto isagu wuxuu leeyahay:
aad u fiican boostadaada halkii aan ka soo dejisan lahaa qaabka ku jira exc
tabaruc aad u wanaagsan si loo diyaariyo xirmo dhan oo macluumaad iyo aqoon ah
Fco isagu wuxuu leeyahay:
Francisco Hernandez isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin isdhexgalka macluumaadka. Waxbarashada, isticmaalka iyo maareynta saxda ah ee macluumaadka waa hubka ugu fiican ee looga hortago iyo xukunka.
Aitor isagu wuxuu leeyahay:
Inta kale ma aqaan, laakiin waxa aniga igu soo dhacayaa waa warqad leh xog ay qaaciddada kaliya tahay in lagu daro lambar horay loo sii qorsheeyay ee xog isuduwidda "hore loo xisaabiyay". Waxay leedahay cago iyo madax midna, fikradeyda. Haddii aad iska hubin karto.
boorashyada isagu wuxuu leeyahay:
mahad kaalin fiican mahadsanid friend'm dab damiye ah iyo dadka hadda waxa ay isticmaalaan taleefannada gacanta GPS waxaan u baahan tahay marka qof reorta sida lumay on my xisaabinta phone iyo seconds leeyihiin UTM isuduwaha for search la daalacashada caadiga ah iyo on laptop ah inaad isla markiiba la ogaado in qofka waa qaybta iyo sidaas xirto search goobada
Michal isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsanid, waxaan helay qaar ka mid ah macluumaadka xiisaha leh ee ku saabsan faylka faylka ee file-extensions.org.
Adhijir isagu wuxuu leeyahay:
Jo, Waxaan runtii ku qasbanaan doonaa inaan boos ka helo qoraalladayda. Thanks to blog aad ka heshay bogga laga soo dejiyey faylasha shp ee ku saabsan Honduras, iyo hadda in aan marin lahaa isku-duwayaasha si aan u soo saaro lakabka Quantum GIS, xaashidu waxay ahayd taakuleyn aan la filayn ah.
kaliya waxaan doonayaa in la ogaado in aan isticmaalo Linux iyo OpenOffice 3.0, oo aad diinta resume kibir ka shaqeeya Calc. No Waxaan u suurtagashay in nuqulka faylka noqotay in format CSV, laakiin in uusan arrinta oo dhan, maxaa yeelay, ma ay jiraan kuwo dhibco badan, sidaasi darteed waxaan ahaa ku filan samayn gacanta, iyo lambarrada ku wareegsan, maxaa yeelay, lakabka matoorka Quantum u muuqataa in aan taageero tobanle.
Anyway, aad blog waa caawimo ah qiimo loogu talagalay dadka aniga oo kale ah, kuwaas oo ka warqado yimaado, laakiin waa xiiso galaya dunida ka mid ah nidaamka macluumaadka juqraafiyeed.
Kuma siiyo kumanaan mahadcelin ah, maxaa yeelay waxay horeyba uga sameeyeen dabaqa sare ...
Si aad u sheegto waxaad isticmaali kartaa
Salaan hoose waxaan kaliya kuugu mahadcelin karaa tabarucyada kala duwan ee aad halkan ku soo bandhigtay; Gaar ahaan, "isu-beddelka" isku-duwidda isku-duweyaashu waxay ahaayeen kuwo wax tar leh. Hal su’aal: sidee ayay noqonaysaa in laga soo xigto wax ka beddelkaaga dokumentigaaga?
Alejandro Vilchis isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo galvarezhn, waxaan ka helay boggaaga aad u xiiso badan, aniguna aad ayaan ugu fiicnaa. Waad ku mahadsan tahay
Ku-gudbinta Shahaadooyinka illaa Darajooyinka daqiiqado iyo ilbiriqsiyo:
Gibran isagu wuxuu leeyahay:
Hada, tani waa mid aad u fiican, qofna ma yaqaanaa falsafad laakiin si aad ugu beddesho darajooyinka tirooyinka illaa digrii? mahadsanid hore
riyooda isagu wuxuu leeyahay:
Muuuuuchas mahadsanid, tani waa wanaag wanaagsan!
Caawin aad u fiican !! Waad ku mahadsantahay inaad wadaagto macluumaadka noocan ah.
San Renato isagu wuxuu leeyahay:
Haye ... waxaan ku sameynayay sahan GPS laakiin arrimaha "xusuusta farsamada" (waxaan ilaaway fiilo anteeno ah) ma dhameystiri karin sahankeyga waxaana ku sameeyay badmaaxe ... mana garaneynin sida loogu badalo iskuduwaha ... rush wanaagsan ... weyn !!!!
waa inaad ku qortaa caanaha oo dhan,
waxay gashaa safafka iyo tiirarka aan la arki karin isla markaana nuqulada ku dhejisan
dianicus isagu wuxuu leeyahay:
aad u fiican oo wax ku ool ah, mahadsanid! xitaa sidaas darteed waxaan haystaa wax yar oo dhibaato ah, maxaa la sameeyaa markaan haysto ku dhowaad 8000 iskuduwaha si aan u beddelo ...? - heerka kaliya wuxuu oggol yahay 323… - Waxaan isku dayay inaan jiido qaaciidooyinka laakiin ma shaqeyneyso.
Si fudud, dhakhso ah, waa la heli karaa, ma garanayo waxa kale ee aad codsan kartid.
Waad ku mahadsantihiin inaad isku xirto juquraafi ahaan, xaashidan sare waxay ka timaadaa waxa aan uga baahanahay shahaadooyinka.
Caawimaad kale haddii aad i siisid waa haddii ay jiraan waraaqo isbeddel ah oo laga soo bilaabo tme si ay u fuliso, iyo waliba dhinaca kale. waad ku mahadsantahay
Hambalyo David boostadan Waxay leedahay xaashi dheellitiran oo ka soo horjeeda, laga soo bilaabo juqraafi.
Ku saabsan sameynta bog beddelaya jajab tobanle illaa darajooyin, daqiiqado iyo ilbiriqsiyo ... waxaa laga yaabaa in maalmahaas midkood aan u fadhiisto si aan u sameeyo
Shaqo aad u wanaagsan !! Hambalyo. Waxaan sidoo kale lashaqeeyaa beddelka noocan ah, laga bilaabo utm ilaa tme, tme ilaa utm iyo geodesics iyo dhammaan isku-beddelka suurtagalka ah, waxaan isticmaalaa barnaamijka TMCalc, si fiicanna wuu iigu shaqeeyaa, laakiin mararka qaarkood waxaan haystaa warqad tayo sare leh oo aan ku sameeyo isbeddellada oo aan ahayn barnaamijka, haddii qof uu ka socdo UTM ilaa Geodeics-ka heer sare wuxuu noqon lahaa waxtar weyn aniga ...
Ujeeddadayda ugu weyni waxay ahayd inaan helo boggan. Waa xaashi sare oo ii dhaafaysa darajooyin waa jajab tobanle (45.7625 digrii) illaa daqiiqado digrii iyo ilbidhiqsiyo ah (45 ′ 45 ′ 45.000 ′), ma i caawin kartaa, raalli ahaw haddii aanu kani ahayn gole .. e-maylkaygu waa ingdvd1@hotmail.com
María Alonzo isagu wuxuu leeyahay:
Si aad uga mahadcelisid macluumaadka, waxaan ahaa mid aad u faa'iido leh, feylka waa mid aad u fiican.
WAX AAD U BAAHAN TAHAY WAXBARASHADA MACLUUMAADKA IYO WAXAAD TAHAY IN AAD KA BADAN YAHAY DHAMMAAN
Ulises Urcid Beez isagu wuxuu leeyahay:
Wanaag, mahadsanid aad u badan.
GUULEYSATAY ... WELI IIMA SIINAYO .. MAHADSANID .. FILILKAN ...
WAAD MAHADSANDAHDAY… °°° !!!!!